Kedu ihe kpatara na ị gaghị azụrụ weebụsaịtị ọzọ | Martech Zone
Nke a ga-abụ obi ọjọọ. Ọ dịghị otu izu na-aga na enweghị m ụlọ ọrụ na-ajụ m ego ole anyị na-akwụ maka a ọhụrụ website. Ajụjụ ahụ n’onwe ya na-ewelite ọkọlọtọ na-acha uhie uhie jọrọ njọ nke na-apụtakarị na ọ bụ igbu oge m ịchụ ha dịka onye ahịa. N'ihi gịnị? N'ihi na ha na-ele anya na weebụsaịtị dị ka ọrụ dị iche iche nke nwere mmalite na njedebe. Ọ bụghị… ọ bụ a ọkara na-ga-mgbe niile kachasị na tweaked.
Atụmanya Gị Gafere Weebụsaịtị Gị
Ka anyi bido site na ihe kpatara iji jiri webusaiti malite. Weebụsaịtị bụ akụkụ dị oke mkpa nke gị zuru ezu ọnụnọ dijitalụ ebe ewuru aha gị ma ị nwere ike ịnye ndị ahịa nwere ike ozi dị oke mkpa. Maka azụmahịa ọ bụla, ọnụnọ dijitalụ ha abụghị naanị webụsaịtị ha…
Saịtị ndekọ - ha aputala na saiti ndi mmadu na acho ngwa ahia ma obu oru ha? Ikekwe ọ bụ Angi, Yelp, ma ọ bụ akwụkwọ ndekọ aha ndị ọzọ dị mma.
Ebe akara na saịtị nyocha - Yana ndekọ ndekọ aha, ha na-egosi na saịtị nyocha ma ha na-ejikwa aha ahụ nke ọma? Hà na-arịọ nyocha, na-aza ha, ma na-agbazigharị nyocha ndị na-adịghị mma?
YouTube - Ha nwere vidiyo na YouTube nke ezubere iche maka ahịa na ụlọ ọrụ ha? YouTube bu igwe nyocha nke abuo na vidiyo di egwu.
Saịtị Influencer - Enwere saịtị na ndị nwere mmetụta nwere ọtụtụ ihe na-eso ndị na-ege ntị? Na-agbaso ka a mata gị na saịtị ndị ahụ?
search Engines - Ndị na - azụ ahịa na - achọ ihe ọmụma na ntanetị iji nyere ha aka ime mkpebi. You na-eweta ebe ha na-ele? Have nwere a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya nke ahụ n’esepụghị aka?
Social Media - Ndị na - azụ ahịa na - elele maka ụlọ ọrụ na - ahụ maka ntanetị nke na - enye uru na - aga n'ihu ma na - anabata ndị ahịa. You na-enyere ndị mmadụ aka na ntanetị mmekọrịta na otu ntanetị?
email Marketing - you na-emepe njem, akwụkwọ akụkọ na ozi mgbasa ozi ndị ọzọ na-enyere ndị na-azụ ahịa aka ịnyagharịa njem ahụ?
Advertising - ịghọta ebe na etu mbọ na mmefu ego kwesịrị itinye n'ọrụ iji nweta ndu ọhụụ na ntanetị agaghị eleghara anya.
Hazi ọnụnọ dijitalụ gị n'ofe ọ bụla na ọwa bụ ihe dị mkpa n'oge a ma ọ karịrị naanị ụlọ ọhụrụ webụsaịtị.
Ebe nrụọrụ weebụ gị ekwesịghị ịdị ime eme
Ebe nrụọrụ weebụ gị abụghị eme. N'ihi gịnị? N'ihi na ụlọ ọrụ ị na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe. Inwe ebe nrụọrụ weebụ dị ka ịnwe ụgbọ mmiri ị na-eji ụgbọ mmiri agagharị. Ikwesiri igbanwe onodu ya mgbe nile - ma o bu ndi na-asọmpi, ndi ahia, ihe nchọta ihe nchọcha, teknụzụ na-apụta, ma ọ bụ ọbụlagodi ngwaahịa na ọrụ gị. Ga-aga n'ihu ịhazigharị usoro igodo gị ka ị nwee ihe ịga nke ọma na-adọta, na-agwa ndị mmadụ, ma na-agbanwe ndị ọbịa.
Chọrọ ntụnyere ọzọ? Ọ dị ka ịjụ mmadụ, “Ego ole ka ọ na-eri iji nweta ahụ ike?”Inweta ahụ ike chọrọ iri nri siri ike, na-emega ahụ, ma na-agbalite oge ka oge na-aga. Mgbe ụfọdụ enwere nsogbu na mmerụ ahụ. Mgbe ụfọdụ enwere ọrịa. Mana inwete ahụike anaghị enwe njedebe, ọ chọrọ mmezi na mmezi oge niile ka anyị na-eto.
Enwere mgbanwe dị iche iche dị mkpa ka a tụlee, nyochaa, na kachasị na weebụsaịtị gị:
Nnyocha Asọmpi - ndozi na njikarịcha iji gosi ọdịiche dị na mpi gị. Ka ha na-ewepụta onyinye, kekọrịta mmata, ma dozie ngwaahịa na onyinye ha, ọtụtụ gị.
Nhazi ngbanwe - omume gị maka ịnakọta ndị na-eduga ma ọ bụ ndị ahịa na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata? Olee otu i si eme ya? Nwere nkata? Pịa Pịa ịkpọ oku? -Dị mfe iji?
Teknụzụ Na-apụta - dika teknụzụ ọhụụ na-atụ anya, ị na-etinye ha n'ọrụ? Onye nleta webụsaịtị taa nwere atụmanya dị iche iche, na-achọ ijere onwe ya ozi. Otu ezigbo ihe atụ bụ ịhazi oge.
Ọganihu Ọganihu - bandwidth, ngwaọrụ, nha ihuenyo… teknụzụ na-aga n'ihu na ịmepụta na ahụmịhe onye ọrụ nke na-anabata mgbanwe ndị a chọrọ mgbanwe oge niile.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - akwụkwọ ndekọ aha, saịtị ozi, mbipụta, saịtị akụkọ, na ndị asọmpi gị niile na-anwa iti gị ihe na nchọta ọchụchọ maka ndị ọrụ ahụ nwere ebumnuche kachasị ịzụta. Ileba anya na isiokwu gị na ịchọta ọdịnaya gị dị oke mkpa iji debe usoro a dị oke egwu.
Ihe ọ bụla ụlọ ọrụ na-ere ahịa ma ọ bụ ọkachamara ị na-akwụ ụgwọ kwesịrị ịma nke ọma banyere ụlọ ọrụ gị, asọmpi gị, ọdịiche gị, ngwaahịa na ọrụ gị, akara ngosi gị, na usoro nkwukọrịta gị. Ha ekwesighi nanị ịkwa emo ma ọ bụ tinye ọnụ na ntinye nke imewe ahụ. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe niile ha na-eme, ị kwesịrị ị nweta onye ahịa ọhụụ ga - eso gị rụọ ọrụ.
Etinye ego na A Digital Marketing Process, Not Project
Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ ngwakọta nke teknụzụ, imewe, Mbugharị, njikọta, yana - n'ezie - ọdịnaya gị. Yourbọchị gị ọhụrụ website dị ndụ abụghị njedebe nke ọrụ ịre ahịa dijitalụ gị, ọ bụ n'ụzọ nkịtị Day 1 nke iwulite ọnụnọ ahịa dijitalụ ka mma. Kwesịrị iso onye gị na ya na-arụkọ ọrụ na-enyere gị aka ịmata atụmatụ mkpokọta mkpokọta, na-ebute ụzọ nke ọ bụla ụzọ, ma na-enyere aka ime nke ahụ.
Ma nke ahụ bụ ihe mgbasa ozi mkpọsa, na-emepe emepe a video atụmatụ, nkewa si ahịa njem, ma ọ bụ na-emebe a ọdịda peeji nke… ị kwesịrị ị na-etinye na a na onye òtù ọlụlụ na-aghọta otú ihe niile na-arụ ọrụ ọnụ. Nkwado m ga-abụ ịtụfu mmefu ego weebụsaịtị gị, kama, chọpụta ego ịchọrọ ịme kwa ọnwa iji gaa n'ihu na-eme atụmatụ ịre ahịa dijitalụ gị.
Ee, na-ewu a ọhụrụ website nwere ike ịbụ akụkụ nke atụmatụ ahụ dum, mana ọ bụ usoro mmezi na-aga n'ihu… ọ bụghị ọrụ nke ga-agwụ agwụ.
Tags: gị n'ụlọngaịga n'ihu mmanjikarịcha ntụgharịOdi Ohu ohurummefu ego weebụsaịtịọnụahịa weebụnhazi weebụ